म मृत्युको मुखबाट आएको हुँ, कोभिडसँग खेलबाड नगरौं : डा. कार्की - Sansar Dainik
September 8, 2020 adminLeaveaComment on म मृत्युको मुखबाट आएको हुँ, कोभिडसँग खेलबाड नगरौं : डा. कार्की
साधारण भाइरस हो, पीपीई नलगाएरै उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले भ्रम फैलाउँदा मानिसको ज्यान जान समेत सक्ने उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उनले भने, ‘घरमै बसेर बेसारपानी, कागती पानी खाएर उपचार गर्दा ठीक हुन्छ भनेको पनि सुनेको छु । यस्ता कुराले सरकार र हाम्रो प्रयासलाई धमिल्याउँछ ।’कार्कीलाई साउन ७ गते कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको थियो । निमोनियाका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएपछि ९ गते हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरेर उनलाई ९० प्रतिशत अक्सिजन दिनुपरेको थियो ।
कानुनले दोषी सावित नगर्दै रियामाथि मिडियाको बारम्बार हमला, बलिउडकर्मीको आक्रोश